FAALLO FAAHFAAHSAN: Covid-19 oo JUG aanu kasoo waaqsan gaarsiin kara makaanaddii Maraykanku caalamka ku lahaa!! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka FAALLO FAAHFAAHSAN: Covid-19 oo JUG aanu kasoo waaqsan gaarsiin kara makaanaddii Maraykanku...
FAALLO FAAHFAAHSAN: Covid-19 oo JUG aanu kasoo waaqsan gaarsiin kara makaanaddii Maraykanku caalamka ku lahaa!!
(Hadalsame) 11 Abriil 2020 – Koronafayrasku waxa uu dhaawacayaa booskii Maraykanku ku lahaa adduunka halka Shiinuhu u muuqdo mid buuxin doona booskaas .
Khamiistii 1,940 qofood oo Maraykan ah ayuu koronuhu qudha ka jaray, 31,935 oo kiisas cusub ahna buugaagta ayaa lagu qoray. Qof ahaan waxaan aqaan 5 qof oo loo sheegay in COVID-19 qabaan.
Hal mid oo ka mid ah ayay suurto gashay in uu baaritaan maro, intooda kale waxa dhaqaatiirtooda u sheegeen in aysan isku daalin maxaayeelay la ma hayo qalab baaritaan oo ku filan.
Furinta baaritaanka, arrintu si wayn ayay kaga soo raynayeen asbuucyadii dambe basle ma ahn meel walba. New York, hawlwadeennadii bukaan-la-roorku waxay ABC u sheegeen baaritaanku waa ku adag yahay, xattaa shaqaalaha caafimaadku in ay helaan.
New York, magaaladii lagu naynaasi jirin “magaalada aan waligeed seexan ayaa si deg deg hal mar u dantey. Yeelkeedi 5 asbuuc ka hor Madaxweyne Trump waxa uu ku tookhayay awoodda qalabka baaritaanka ee Maraykanku leeyahay. “Qof walba oo baaritaan u baahan waa la baarayaa… aad bay u qurux badan tahay,” ayuu yiri mar uu booqanayay Centres for Disease Control and Prevention.
Magaalada New York, xaalku waxa uu u egyahay mid aad u liita, maxaabiistii xabsiyada ayaa lagu qodayaa xabaala-wadareedyo, jasiiradda Hart Island. Sannado badan Hart Island waxa ay ahayd halka lagu aaso maydadka aan eheladoodi la hayn. Qarankii ku caan baxay in uu dunida ku hoggaamiyo ganacsiga, hal-abuurka, ciyaaraha iyo galbisyada dagaalka koronafayras ayaa jilbaha dhulka u dhigay.
Maraykanku Shiinaha ayuu caawimaad ka doontay. Saaxiibbadayda Maraykanku waxa ay ii sheegeen in ay ka argagexeen waxa dalkooda ka dhacaya. Ayaga iyo malaayiin kale af-kala-qaad ayay ku noqotay. “Waa fadeexad” ayuu yiri Michael Green oo MW Xigeenka Asia CSIS.
Maraykanka waxba u ma diyaarsanayn gaar maaskarada iyo qalabka kale ee aasaasiga ah sida neef-siiyeyaasha. Maraykanku cadowgiisa ugu wayn ee Shiinaha ayuu gacan waydiistay. Shiinuhu waxa ay uga jawaabeen 1,000 xabbo neef-siiyeyaal ah iyo qalab kale oo badan.
Dib u qiimaynta booska Maraykanka ee talada dunida Robert Spalding oo ah bare sare ka ah mac’hadka Hudson Institute waxa uu rumaysan yahay in koroonuhu burburiyay sheekadii Maraykanku waa awoodda dunida. “Waxaan u malaynayaa in sheeko iska tahay in Maraykanku wali yahay awoodda dunida oo dhan,” ayuu yiri. Waa uu sii watay hadalkiisa “dhammaan qalanka farmashiyadeenna yaalla Shiinaha ayaa lagu soo sameeyay.
Dhammaan maaskaraha Shiinaha ayaa lagu soo sameeyay, wax walba Shiinahaa lagu soo sameeyaa.” “Waxaan awoodnaa in ay si la yaab leh ciidankeenna meel walba oo adduunka ah ugu daabbulno, balse dhammaan waxaan marti u nahay Xisbiga Shuuciga ah ee Shiinaha.
Markii Talyaanigu codsaday gargaar qalab caafimaad 26ka dal ee Midowga Yurub aamus bay ugu jawaabeen. Shiinaha ayaa uga jawaabay xirfadlayaal caafimaad iyo qalabkooda. Ireland iyo Serbia ayaa helay caawimaadda Shiinaha ayaguna. In Shiinuhu horumar sameeyaan waa wanaag, dabcan culayskeeda way dareemayaan maadaama koronuhu dalkooda ka yimid ayuu Michael Green.
Sidoo kale waxaa muuqata fursad Shiinuhu ku buuxin karaan ayaga oo adeegsanaya awoodda jilicsan booska uu banneeyay Maraykanka irdaha xirtay, ayuu yiri. Balse Mr. Green ma rumaysna in isbeddal wayn oo sal iyo baar ahi waqti xaadirkaan jiro. Waxa uu rumaysan yahay in safmareenka COVID-19 sababi doono khilaafka Maraykanka iyo Shiinaha oo sii labolixaadsada bilaha iyo sanooyinka soo aaddan.
Faalladaan waxaa qoray David Lipson oo ABC Australia uga soo warramaya Maraynka, waxaa Hadalsame Media u tarjumay Cali M. Diini.
Previous articleCoronavirus and Ramadan: How the Muslim month of fasting will differ this year
Next articleArag inta meelood ee ay ku khaldanayd warqaddii kasoo baxday WWF (Yuusuf Garaad oo wax ka qoray)